Abbaan Bokkuu Karrayyuu fi qaamonni Gadaa Karrayyuu 39 butamuu - Independent Oromia
Abbaan Bokkuu fi qaamonni Gadaa Karrayyuu 39 butamuu
Abbaa Bokkuu Karrayyuu dabalatee, qaamonni Gadaa Karrayyuu Afurtamni (40), Roobii kaleessaa (Mudde 1, 2021) qe'ee Abbaa Bokkuu keessaa butamuun, achi-buutee dhabamsiifamuu.
Odeessa biroon, lolli WBO fi Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itophiyaa gidduutti, Sadaasa 29, 2021 Ona Fantaallee keessatti baname, ilaa har'aatti (Mudde 2, 2021) itti-fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu.
Duguuggaa sanyii: qindoomina LMKII fi finxaaleyyii Amaaraan
Duguuggaan sanyii qindaawaan, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itophiyaa fi humnoota finxaaleyyii Amaaraa kanneen mootummaan leenjisee, hidhachiisee Naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti seensiseen, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Ayyaanaa keessatti, Uummata Oromoo irratti raawwatamu akkaan hammaatee itti-fufee jiraachuu.
Ona Giddaa Ayyaanaa, Ganda Gaattiraa jedhamuun waamamu keessatti qofa, lubbuun Oromootaa baay'inaan 200 olitti tilmaamamu gaaga'amuu; Oromoonni baay'inaan 600 olitti tilmaamaman qe'ee ofii irraa buqqifamuu; manneen jireenyaa danuun, akkasumas, midhaanii fi qabeenyaaleen biroo danuun barbadeeffamuu.
Gama biraatiin, Raayyaan Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itophiyaa, reeffa Oromoota finxaaleyyii Amaaraan ajjeefamanii danuu ibiddaan gubuu, kaanis dhidhimsuu.
Haleellaa meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa furguggifamaniin, Konyaa Gujii Bahaa, Ona Liiban, Ganda Gurraa Dheeraa jedhamu keessatti, Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruun, lubbuun namaa gaaga'amaa, qabeenyis barbadeeffamaa jiraachuu.